ဆင်ခြေဖုံးဧရိယာ (ဓါတ်ပုံ) ကိုအလှဆင်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်အမျှ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဆင်ခြေဖုံးဧရိယာ (ဓါတ်ပုံ) ကိုအလှဆင်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်အမျှ?
ပစ္စည်းတစ်ခုအမျိုးမျိုးသင့်ရဲ့အိမ်တွင်းအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ ပလပ်စတစ်ပုလင်း, ရေမြှုပ်, တာယာ, အဝတ်စုတ်, သံဗူး, အပင်တစ်ပင်, သစ်ပင်ငုတ်တို့ကိုခုတ်လှဲ။ အင်တာနက်ကိုတွင်အလုပ်၏ဓါတ်ပုံအများကြီး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မာစတာ-needlewoman နှင့်အတူတက် လာ. အဘယ်အရာကို post ပါလိမ့်မယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်အလွန်ပျော်မွေ့အတူ။
ဆဲလ်, စည်, နေကြာနှင့်ပျား
တောင် mini ကိုကမ်းခြေလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်
သင်တန်းတွင်ပါသမျှကိုအပြင်ပန်းအသုံးပြုမှု + အနည်းငယ်စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အကြိမ်သုတ်ဆေးသငျ့နှလုံးအလိုဆန္ဒများ, တာယာ, ပုလင်း, ပုံး, အင်တုံ, အကြွင်းအကျန်သွားနိုင်ပါတယ်!
diy အိမ်တွင်း podoydte တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၏ပြုပြင်ပြီးနောက်ကျန်ကြွင်းသောလူအပေါင်းတို့: အဟောင်းပိုက်, အုပ်ကြွပ်, အိမ်သာ, စုပ်, etc kitchenware ဖို့တောင်မှအဟောင်းကိုဖိနပ်ကိုလည်းဆင်ခြေဖုံးဧရိယာအသွင်ပြောင်း။
သုံး pallets ၏စုံတွဲတစ်တွဲရယူဖို့လျှင်, သင်စေနှင့်ဥယျာဉ်ပရိဘောဂနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ site ကိုအိမ်တော်ထဲကပစ်အားလုံးကိုအဆင်သင့်, သင့်လျော်သည်ကိုအလှဆင်ဖို့, ဒီအပေါငျးတို့သ vutoruyu အသက်, စိတ်ကူးစိတ်သန်းသုံးစွဲဖို့အဓိကအရာပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျိုးကုလားထိုင်ကိုအသုံးဖို့ဘယ်လိုပါပဲ။
အဘယ်အရာကိုလက်မှုပညာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်နှင့်မည်သို့ဗီဒီယိုကြည့်ရှုသည်, မိမိ villa ဆင်ယင်ခြယ်သဖို့:
နွေဦးရာသီ, နွေရာသီရုံနိုင်ငံ၏အလယ်, များစွာသောဥယျာဉ်မှူးသည်သင်၏တိုင်းပြည် site ကိုသနျ့ကြောင့်လူတယောက်ကျက်သရေပေးဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားကြသောအခါရာသီအတွက်မကြာမီလာသေး၏။ သင့်ရဲ့ site ကိုအလှဆင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေပိုမိုများကဲ့သို့ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့အိုင်ဒီယာဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါဗုံနှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြစို့, ဆောင်းတွင်းကျော်, သူတို့ကဆက်ဆက် priglyadny ၏ကြင်နာလက်ခံရရှိပြီမဟုတ်ကဲ့သို့သောအဖြစ်ဝေးစိတ်ကူးစိတ်သန်းလောက်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်၎င်းတို့၏အရောင်များကို refresh နိုင်သည်
အဟောင်းကိုဖိနပ်မလိုအပ်ခဲ့ဘူး, အိတ်၏, ကွန်တိန်နာထိုကဲ့သို့သောကုတင်စေနိုင်သည်
ငါသူတို့ခြယ်သနေကြသည်ကိုပင်လျှင်, ဖို့မြေနေရာပေးသောဆိုက်, ထရှုပ်ပွတ္ထုကိုထောကျပံ့မပေးပါဘူး။ အဆိုပါအလှဆင်သောအဘို့ကိုစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူလုပ်ပါလိမ့်မယ်ကုတင်, လမ်းကြောင်း။ ထိုလူအပေါင်းတို့ကဤသင်ကိုယ်တိုင်, podsmotrev စိတ်ကူးများသို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဒါမှမဟုတ်ရှုခင်းစင်တာများကိုပြုကြရန်လွယ်ကူသည်။ ကုတင်နှင့် rockeries zaschebnennym မြက်ခင်း zamulchirovat သစ်သားချစ်ပ်များ၏ဒေသများနှင့်အတူပေါင်းစပ်။ ဒါဟာအဆင်းလှ driftwood နှင့်ကျောက်ဆောင်ဖြစ်ရန်အလွန်သင့်လျော်သည်။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအကြောင်းမရှိသွား, ငါတတ်နိုင်သမျှဤအရာတို့ကိုအနေဖြင့်တစ်ဦးသေဆုံးဖြစ်၏။ ဤဒေသများ၏မတူကွဲပြားမှု, အာကာသ၏ရှုပ်ထွေးဖန်တီးအမြင်အာရုံဟာသူတို့ရဲ့အလှဆင်ခြင်းနှင့် berry သီးချုံချွတ်ပိတ်ဆို့နှင့်သွယ်ဝိုက်အကွေ့အကောက်များသောလမ်းကြောင်းပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါကဲ့သို့သောကိရိယာလုံခြုံသေချာပါတယ်။
19 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,318 စက္ကန့်ကျော် Generate ။